Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Xagardheere oo Kulan Muhiim Ah Qabsaday.
OYSU Xagardheere oo Kulan Muhiim Ah Qabsaday.
Shalay oo Axad ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 24/9/17 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Faafi kaqabsoomay shir balaadhan oo ay isugu yimaadeen xubnaha ururka Dhalinyarta iyo Ardayda Soomaalida Ogadenia OYSU fariciisa Xagardheere.
Kulanka ayaa sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay halgame Sheekh Cismaan oo kamid ah howl wadeenada Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia UCSO, wuxuuna sheekhu xubnihii kulanka soo xaadiray kubaraarujiyay cabsida Allaah iyo fadliga Jihaadka.
Intaas kadib xoghayaha OYSU Xagardheere mudane Aamiin Axmed ( Aamiin Dheere ) ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysay siiyay xubnaha kulanka sooxaadiray wuxuuna mudane Aamiin sheegay ujeedada kulanka loo qabtay.
Waxaa ugu horaynba lagu soo dhaweeyay Halgame Maxamuud Sooc oo kulanka marti sharaf ku ahaa wuxuuna siqoto dheer uga warbixiyay xaalada halganka iyo kaalinta dhalin yarada looga baahan yahay.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay Sh Cabdulaahi Xaashir kamid ah rugcadaaga in badan halganka kusoo dhex jiray wuxuuna mudane Xaashir guud mar kooban kusoo sameeyay marxaladihii kala duwanaa ee halganku uusoo maray, sidoo kale wuxuu halgame Xaashir xog kabixiyay xaalada taliska wayaanuhu uu kusugan yahay.
Ints kadib waxaa sifiican looqaadaa dhigay qodob doodeed muhiim ahaa oo gudigu ay soo dhigeen iyo su’aalo dag dag ah oo xubnaha si kadis ah loowaydiinayay, waxayna xubnuhu sifiican uga jawaabeen su’aalihii lawaydiiyay.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa si habsami ah kusoo dhamaaday kulankii ay yeesheen ururka OYSU fariciisa Xagardheere.